Thursday February 23, 2017 - 08:37:52 in Wararka by Super Admin
Wasiirka koowaad ee DF-ka waxaa loo magacaabay Nin heysta dhalashada dalka Norway islamarkaana kamid ah shakhsiyaadka boobka ku haaya kheyraadka dalka.
Xassan Cali Kheyrre Geedi wuxuu madax ka yahay hay’adda Qaxootiga Norway ee Bariga Afrika ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan NRC.
R/wasaaraha cusub wuxuu katirsanyahay Xisbiga Damul Jadiid waxayna boobka kheyraadka dalka Soomaaliya ku saaxibeen Xasan Gurguurte iyo siyaasiyiin kale oo kasoo jeeda dhanka maamulka Puntland.
ina Cali Kheyrre Geedi wuxuu caan ku yahay kaalintii dullaanimo ee uu ka galay in dowladda Norway ay gacanta ku dhigto mashruuca baarista shidaalka dalka Soomaaliya, warbixin ay soo saartay Q.Midoobe oo ku aaddan musuq maasuqa dhanka maaliyadda iyo hubka Soomaaliya ayaa magaciisa lagusoo daray Xassan Cali Kheyrre.
Sanaddii 2014 ayaa Xassan Cali Kheyrre Madax looga dhigay shirkadda Som Oil And Gas oo ay saami ku leeyihiin dowladaha Ingiriiska iyo Norway.
Dadka yaqaan Xassan Cali Kheyrre waxay sheegaan in uu xiriir dhow laleeyahay wadamada Itoobiya iyo Kenya isagoo galaangal dhanka boobka kheyraadka dalka Soomaaliya ku leh mandiqadda geeska Afrika.
Madaxa Hay'adda Qaxootiga Norway ee Bariga Afrika magacaabistiisi xilka R/wasaaraha Soomaaliya waxaa kaalin weyn ka geystay Jeneraal Gabre madaxa sirdoonka ciidanka Itoobiya ee Soomaaliya iyo saraakiisha UN-ka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho.
Labada Mas'uul ee ugu sarraysa dowladda Federaalka waa muwaadiniin haysta dhalashada wadamada Mareykanka iyo Norway taasi oo ka dhigan in xukuumadda hadda jirta ay dhanka dabadhilifnimada kaga dheerayso xukuumaddii uu Xasan Gurguurte madaxda ka ahaa.